Chhaharaa | लकडाउनपछिको विश्वअर्थतन्त्र
—हेम विक्रम सिलवाल
हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख मुलुक कोभिडको नाममा हुने लकडाउनले गम्भीर परिस्थिति जन्माएर उद्योग धन्दा, शैक्षिक संस्था लगायतका अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरू सहजरूपमा सञ्चालन नहुँदा अर्थतन्त्रमा परनिर्भर हुनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भयो । डब्लु एच ओको निर्देशनमा विश्वभरिका अर्थतन्त्र मेडिकल माफियाको नियन्त्रणमा जाँदैछ । हाम्रो जस्तो देश वैदिक सनातन कालदेखि आयुर्वेद पद्धतिबाट औषधोपचार हुँदै आएकोमा आधुनिकताको नाममा मेडिकल पद्धतिलाई एकतर्फी रुपमा पुष्ठपोषण गर्दै गएर आध्यात्मिकता र नास्तिकताबीचको अन्तर संघर्ष हुने निश्चित देखिन्छ । मानव जातिको परम्परादेखि आफ्नै मूल्य मान्यता, संस्कार, रितिरिवाज, भाइचाराको सम्बन्ध परापूर्वकालदेखिको आफ्नै रहनसहन र वातावरणमा हुर्किँदै आएका हुन् । युरोप, फ्रान्सिसि क्रान्तिका दौरान पहिलोपटक राजा फालेर धर्म निरपेक्ष लागू गरेका मुलुकहरू पनि कोराना भ्याक्सिन नाटक हो अनिवार्य गर्नु आवश्यक छैन भनेर लाखौँ जनता सडकमा देखिए । यो आन्दोलनको असर बेलायत, हल्याण्ड हुँदै अमेरिकाका केही स्टेटमा समेत तिब्र असर देखा परिसकेका छन् । हाम्रो जस्तो देशले पनि अन्तराष्ट्रिय मेडिकल माफियाको चङ्गुलमा फँसेर जनतालाई घरबन्दी बनाइ राज्य सञ्चालकले नै आतङ्क फैलाउन पाइँदैन । कथित लोकतन्त्र र मानव अधिकारका कुरा गरेर कहिल्यै थाकेनौँ । लोकतन्त्र भनेको वैदिक सनातन देखि चलिआएको गायत्री मन्त्र जस्तो छ । बोल्न पाइनि, खान नपाइनि, हिँड्न नपाइने, खान दिन नपर्नि । यो खालको राज्य आतङ्क विरुद्ध आम नागरि सङ्गठित भएर आन्दोलनमा गर्न जरुरी छ । अनिवार्य भ्याक्सिन जरूरी छैन । जो बिरामी हुन्छन्, हिजो पनि अस्पताल गएकै थिए, आजपनि जान्छन् नै । संसारमा थुप्रै प्राणघातक रोग देखिए । कोरोनाभन्दा बढि अन्य कारणले मरिरहे छन् । पहिला कहिल्यै लकडाउन गर्नु परेन । तर अहिले किन ? अहिले विश्व दुइ धुर्वमा विभाजित छ । नास्तिकता र आध्यात्मको द्वन्द्व हुने सुनिश्चित छ । आजको नास्तिकताको नेतृत्व वान वर्ल्ड अर्डर मार्फत सञ्चालित छ । यसले आध्यात्मिकता (विशेष गरी वैदिक सनातन) लाई प्रमुख टार्गेट गरेको देखिन्छ । अब हामीले समय छँदै सोंच विचार नगर्ने हो भने हाम्रो परम्परालाई कसरी जोगाउने ? यस परिस्थितिमा धार्मिक गुरुकुल पद्धति भविष्यमा इतिहासकार पानामा सीमित हुने
देखिन्छ । अब सम्पूर्ण आध्यात्मिक शक्ति हरू हो ईश्वरमा विश्वास गर्छन्, ईस्लाम, क्रिस्चियन, यहुदी, बौद्ध, बागी र हिन्दूहरू विश्व भरिका एकजुट भई नास्तिकता को विरुद्ध संगठित आवाज उठाउन जरूरी छ । धर्म विरोधी तत्वले आज संसारमा मस्जिद, चर्च, गुम्बा, मन्दिर लगायत का आस्थाका धरोहरहरू कोभिड–१९ को नाममा लकडाउन गरेर मानवता विरोधि गतिविधि सञ्चालन गरिरहेका छन् । यसका विरुद्ध संसारका आस्तिक मानवजातिहरू एकजुट भएर प्रतिकार गर्न जरुरी छ । फेसबुक वालबाट